ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ၂၀၁၀ မတ်လ ၉ ရက်နေ့မှစကာ အစိုးရပိုင် သတင်းစာများမှ အချပ်ပိုအဖြစ် ရှေ့စဉ်နောက်ဆက် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး ‘ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ’ ကို ၂၀၁၀ မတ်လ ၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ယင်းဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ တာဝန်များမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေးနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအား ကြီးကြပ်ရေး တို့ဖြစ်သည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင် အနည်းဆုံး ၅ ဦးကို နယက မှ ခန့်အပ်တာဝန်ပေး နိုင်သည်ဟု ရေးသား ပါရှိသည်။ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် အသက် (၅၀) ပြည့်ပြီးသူများ ဖြစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် နယကမှ ယူဆသူဖြစ်ရမည်ဟု ပါရှိသည်။ 
↑ Myanmar leader says 2010 election plans on course. Kuwait Times. November 30, 2008.
↑ လာမည့် နိုဝင်ဘာတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည်။ (ဧရာဝတီ)
↑ နအဖ၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ ထုတ်ပြန် (ခေတ်ပြိုင်)
↑ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ တရားမမျှတဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော (ဧရာဝတီ)
↑ လွှတ်တော်အသီးသီးတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း စာရင်း (မဇ္ဈိမ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အထွေထွေ_ရွေးကောက်ပွဲ၊_၂၀၁၀&oldid=564129" မှ ရယူရန်
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။